Lullymore Heritage & Discovery Park dia fisarihana mpitsidika iray mandresy amin'ny andro any amin'ny nosy mineraly Lullymore miaraka amina fahitana mahafinaritra an'i Bog of Allen malaza. Ora iray monja avy eo Dublin eo anelanelan'ny vohitra Rathangan sy Allenwood, ny Park no toerana tonga lafatra ho an'ny olona amin'ny taona rehetra mba hiala sasatra sy hiala sasatra.
Misy zavatra ho an'ny rehetra - ny fianakaviana mitady fianarana sy mahafinaritra amin'ny tontolo azo antoka, ireo tia natiora, mpankafy tantara, mpandeha an-tongotra ary mpanao rambola!
Ny mpitsidika rehetra dia manana fahalalahana hijerena ireo zava-mahatalanjona voajanahary ao Lullymore amin'ny làlambe midadasika any anaty ala mikitroka sy eo amoron-dranomasina biodiversité. Mandritra ny lalana dia ahitanao fampirantiana mifandraika milaza ny tantara manankarena an'i Lullymore miaraka amin'ny rohy mankany amin'ny Pagan taloha, tranokala Monastic nandritra ny 1000 taona, fialofana ho an'ny mpikomy tamin'ny 1798 ary fonenan'ny revolisiona indostrialy ao amin'ny 20th Taonjato. Ankehitriny, amin'ny fiandohan'ny vanim-potoana maitso vaovao, ny Park dia mampiseho ny bibidia mahatalanjona an'ny bogaly Irlandy ary fifandraisana maharitra kokoa amin'ny tanin-tany.
Ny fahafinaretana ao amin'ny fianakaviana dia azo antoka ihany koa amin'ny faritra filalaovana traikefa an-kalamanjana lehibe sy golf 18 lavaka, fitsangatsanganana an-dalamby, fiompiana biby fiompy ary fihazana harena majika hamahana. Fijanonana maimaimpoana sy WIFI. Café misy fipetrahana mihoatra ny 200, miantsena eny an-toerana ary azo aleha ny seza misy kodiarana.
Ilaina ny famandrihana an-tserasera, kitiho azafady Eto hanao famandrihana
Ity fitambarana mahafinaritra sy fianarana mahafinaritra ity dia mahatonga an'i Lullymore ho ?? tsy maintsy-ho hita ?? rehefa mitsidika an'i Kildare. Ankafizo ny fitsidihanao ary tadiavo ny majika an'i Lullymore!
Adventure sy hetsika, Lova sy tantara, Outdoors, Manohana any an-toerana, Fianakaviana ankohonany, Natiora sy Biby, Kildare
Rathangan, County Kildare, R51 E036, Irlandy.
Misokatra Alatsinainy - Alahady 10 maraina - 6 hariva